Chelsea Oo Tartan Kala Kulmeysa Helitaanka Weeraryahanka Torino Andrea Belotti?
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea oo tartan kala kulmeysa helitaanka weeraryahanka Torino Andrea Belotti?
April 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasbanaan doonto inay tartan kala kulanto kooxo dhowr ah hadii ay doonayaan saxiixa Lazio Andrea Belotti xagaagan.
Blues ayaa loo saadaalinayay inay u dhaqaaqeyso 32-jirka heerka caalami ee dalka Talyaaniga iyagoo raadinaya weeraryahan cusub.
Belotti, oo 12 gool dhaliyay shanna caawiye ka ahaa Serie A xilli ciyaareedkan, wuxuu qandaraas kula jiraa Lazio ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Si kastaba ha noqotee, Tuttosport ayaa sheeganeysa, hadii Chelsea ay dooneyso inay keento 27 jirkaan inuu hogaamiyo weerarkooda, marka hore waa inay ku qanciyaan inuu ku biiro.
Waxaa la soo jeedinayaa in kooxaha isku xifaaltama gudaha ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur ay sidoo kale isha ku hayaan Belotti, halka Inter Milan ay ka mid tahay tiro ka mid ah kooxaha xiisaynaya Talyaaniga.
Belotti ayaa lixdii sano ee la soo dhaafay ku qaatay Stadio Olimpico, isagoo 220 kulan u saftay Torino tartamada oo dhan.